वाम गठवन्धनका सुवेदीलाई पछि पार्दै काठमाडौँ–६ मा काँग्रेसका प्रधान विजयी - वाम गठवन्धनका सुवेदीलाई पछि पार्दै काठमाडौँ–६ मा काँग्रेसका प्रधान विजयी
भारतीय नोट नसाटिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समस्या ! | जेठी आमाले दिएको चाउमिन खाँदा दाजुभाईको मृत्यु ! | सेलरमिलमा आगलागी हुँदा नौ लाखको क्षति | कौडा खेल्ने नौ जना पक्राउ | भारतमा मन्दिरको प्रसाद खाँदा ११ को मृत्यु, ७० जना अस्तालमा भर्ना
वाम गठवन्धनका सुवेदीलाई पछि पार्दै काठमाडौँ–६ मा काँग्रेसका प्रधान विजयी
नेपालबहस संवाददाता २०७४, २३ मंसिर, 04:27:23 PM
२३ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा नेपाली काँग्रेसका भीमसेनदास प्रधान विजयी भएका छन् ।
रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधान १६ हजार ७८५ मत ल्याई विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिए । प्रधानले वाम गठबन्धनका झक्कु सुवेदीलाई एक हजार ३०० मतान्तरले विजयी भएका हुन् ।
सुवेदीले १५ हजार ४८५ मत प्राप्त गरे । तेस्रो स्थान विवेकशील साझा पार्टीले ओगटेको छ । विवेकशीलका रमेश सिलवालले चार हजार २२५ मत पाएका छन् ।
यो क्षेत्रमा कूल ५८ हजार १८६ मतदाता रहेकामा ४२ हजार ३९९ अर्थात् ७२.८६ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन अधिकृत पाण्डेले बताए । यसमध्ये ३९ हजार २६८ मत सदर भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको मतगणना सकिएलगत्तै प्रदेशसभा सदस्यको मतगणनाको तयारी भइरहेको छ ।
क्षेत्र नं १ को प्रदेश (क) मा काँग्रेस विजयी
यसैगरी, काठमाडौँ क्षेत्र नं १ को प्रदेशसभा (क) मा नेपाली काँग्रेसका दीपेन्द्र श्रेष्ठ विजयी भएका छन् ।
श्रेष्ठले छ हजार २३१ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी वाम गठबन्धनकी विष्णुकुमारी भुसालले चार हजार ६१८ मत ल्याएको काठमाडौँका मुख्य निर्वाचन अधिकृत रमेशराज पोखरेलले बताए ।
तेस्रो स्थानमा रहेको विवेकशील साझा पार्टीकी समीक्षा बाँस्कोटाले चार हजार ३४३ मत पाएका छन् ।
क्षेत्र नं १ को प्रदेश (ख) मा वाम गठबन्धन विजयी
प्रदेश (ख) मा भने वाम गठबन्धनका गणेशप्रसाद दुलाल विजयी भएका छन् । उनले चार हजार २४२ मत प्राप्त गरेका छन् । उनी एमाले उम्मेदवार हुन् ।
उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका सुरजचन्द्र लामिछानेले चार हजार २२३ मत पाए । तेस्रो स्थानमा रहेको विवेकशील साझा पार्टीका पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालले दुई हजार ७२५ मत ल्याए ।
क्षेत्र नं ४ को प्रदेश (क) मा काँग्रेस विजयी
काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ को प्रदेशसभा (क) मा पनि काँग्रेसका पुराना नेता नरोत्तम वैद्य विजयी भएका छन् । वैद्यले आठ हजार ७१९ मत पाए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी वाम गठबन्धनका निर्मल कुइँकेलले सात हजार ७९४ मत प्राप्त गरे ।
कुइँकेल दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा क्षेत्र नं ४ मा काँग्रेस नेता गगनकुमार थापाबाट पराजित भएका थिए । यो प्रदेशसभामा तेस्रो स्थान विवेकशील साझा पार्टी नै भयो । विवेकशीलका दिपेश श्रेष्ठ वैद्यले तीन हजार ५१७ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृत हरिप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभा (ख) को भने मतगणना भइरहेको उनले बताए ।
२०७४, २३ मंसिर, 04:27:23 PM
यसरी सम्पन्न भएको थियो यसअघिको महासमिति बैठक : एक झलक
जातिय छुवाछुत गरे सदस्यता खारेज हुन्छ : कांग्रेस
कांग्रेस महासमिति बैठक शनिबारदेखी
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा आज पनि धर्ना
कांग्रेस महासमिति बैठकको तयारीमा : गाँस र बास सहभागीले आफैं गर्नुपर्ने
भारतीय नोट नसाटिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समस्या !
दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका १९ जनाको सामूहिक दाहसंस्कार गरिने
चिरपटले हानेर नातिले गरे बाजे बज्यैको हत्या !
हात मिलाएका कांग्रेस नेताहरुको मन कहिले मिल्छ ?
सेलरमिलमा आगलागी हुँदा नौ लाखको क्षति
नियममा फिटिक्कै जान नमान्ने ट्याक्सी चालक कारवाहीमा